Ogige Apple Apple 2 | Esi m mac
Apple Campus 2 ga-eme n'ọdịnihu ga-agụnye ebe ndị ọbịa nwere ụlọ nri, ụlọ ahịa na echiche
Apple na-eme atụmatụ iwu ebe obibi ndị ọbịa na Campus 2 ọhụrụ ya, nke ga-agụnye gazebo ụlọ na-ele anya na isi ụlọ, a cafeteria na a ahịa nke 940 square mita, ebe ndị ọbịa nwere ike ịhụ ma zụta ngwaahịa Apple ọhụụ niile erere.
Ọdịdị ahụ, dị ka ọtụtụ ụlọ ahịa Apple ndị ọzọ, ga-adị nke ejiri iko mee ka ejiri eriri carbon na nnukwu mbara igwe. Akwa mgbago na mbuli elu ga-akpọrọ ndị ọbịa ebe a na-elele ihe, ebe a ga-ahụ ụlọ ọrụ ndị ọrụ Apple n'ụlọ mgbanaka ahụ.
Ogige ụlọ akwụkwọ Apple ugbu a nwere Apple Store ugbu a mechiri emechi nke na-ere uwe na sundries nke ika ahụ, mana ụlọ ọrụ ndị ọbịa raara onwe ha nye nwere ụlọ ahịa ere ụdị ngwaahịa Apple niile dị ọhụụ.
E mewo ka knownlọ Ọrụ a raara nye nleta mara ekele ka akwụkwọ ndị mbụ nke e gosipụtara na City of Cupertino, ya bụ, n'April, ewepụtara ọrụ Campus iji nweta nnabata tupu oge ahụ nke gụnyere ịkpọtụrụ ebe ndị ọbịa bịara n'ụlọ iko, mana amabeghị nkọwa ahụ ruo ugbu a. Agbanyeghị, ogologo oge gara aga anyị na-ekwu maka owuwu nke ụlọ nzukọ na kampos na ụlọ oriri na ọ cafụ cafụ, ma dịka o kwuworị nkọwa nke ebe ndị ọbịa ahụ amabeghị.
Mgbe arụchara ọrụ a, ụlọ akwụkwọ ọhụrụ ahụ ga-egosipụta ụlọ bụ isi karịa 260.000 square mita n'ụdị mgbanaka, ụfọdụ oghere na-adọba ụgbọala n'okpuru 628, mgbatị ahụ na square mita 9300 na otu ụlọ nzukọ nke nwere oche 1000 nke nwere mita square 1150 maka ijide ihe omume na nleta n'ime etiti ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Store » Apple Campus 2 ga-eme n'ọdịnihu ga-agụnye ebe ndị ọbịa nwere ụlọ nri, ụlọ ahịa na echiche
Ihe ọhụrụ MacBook Pro 13 "na Force Touch dị ugbu a na ngalaba eweghachiri ma debe ya
Apple wepụtara ọkwọ ụgbọala ọhụụ maka ndị ọrụ FaceTime na Mac